करिष्माले किन छाडिन् बाबुरामको साथ ? - बडिमालिका खबर
भिनेत्री करिष्मा मानन्धर यतिबेला नेकपा एमालेमा प्रवेश गर्न लागेको विषयले चर्चा पाइरहेको छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग पटक–पटकको भेटपछि उनी एमालेमा प्रवेश गर्न लागेकी हुन् । यसअघि उनले डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीमा सक्रिय भएर काम गरिन् । नयाँ शक्ति पार्टी संघीय समाजवादीमा एकीकरण भएपछि पनि करिष्माले केही समय काम गरिन् । तर, विस्तारै उनी राजनीतिबाट निष्क्रिय बनिन् ।
(राताेपाटीमा खतिवडासँग कुराकानीमा आधारित)